सपनाको चिहानबाट- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
तीनवटा एकेडेमी प्राज्ञविहीन भएर महिनौं खाली बसेको कुरा पत्रपत्रिकाले लेखेको लेख्यै छ । खै कहिले सदस्यहरूको पूर्ति गर्ने हो ? दिदीको हन्डर कहिले सक्किने हो ? पार्टीमा नवप्रवेशीहरूकै हालीमुहाली छ भन्ने सुन्छु ।
काठमाडौँ — तिमा दिदीको दुःख र हैरानी देखेर म आफैं हैरान र दिक्क भएको छु । यो उमेरमा आएर पनि अब यत्तिको भागदौड गर्न छाडिदिनुस् भनेको दिदीलाई पटक्कै लाग्दैन ।
दिदी आफ्नै जिद्दीमा अडिनुहुन्छ, कहिले बिहानको चार बजे घरबाट निस्केको मान्छे राति गाडी नपाएर अलपत्र परेपछि केटाहरू बाइक लिएर लिन जानुपर्छ । कहिले भोकै, कहिले प्यासै तैपनि चेत आएको हैन । आफू हिंडिरहेको बाटोलाई बदल्ने सोच आएकै हैन, प्रयास गरेकै हैन ।
यो भागदौड, यो समर्पण र यो योगदानले दिदीलाई के नै दियो र ? रातोदिनको हन्डर, जीवनभरि ठक्कर र एक्लोपनको पीडाबाहेक केही पनि दिएन त । कत्ति भनिसकें, घरैमा बसेर लेख्नुहोस्, साथीभाइहरूसँग भेटघाट गर्न मन लाग्यो भने मिलेसम्म घरैमा बोलाउनुस्, आउने साथीभाइहरूलाई के खुवाउन मन लाग्छ, बुहारीहरूले पकाइदिइहाल्छन् । कहिलेकाहीं बाहिर जान मन लागे भदाहरूले बाइकमा राखेर लगिदिहाल्छन् भन्यो दिदीले सुने पो । एक डेढ महिना भयो दिदीलाई झन् असारको पन्ध्र आएजस्तो भएको छ । खै, कहाँ जाने हो, के गर्ने हो बिहानै हिंडेको मान्छे रात नपरी घर फर्किने हैन । दिनभरि न राम्रोसँग खानु छ, न पानी पिउनु छ । घर आइसकेपछि अनि यो भयो, त्यो भयो, यहाँ दुख्यो, त्यहाँ दुख्यो भन्यो, स्याहार गर्ने बुहारीहरूलाई हैरान । तैपनि भाइबुहारी र भदाबुहारीहरूले सासू हैन आमा स्याहरेझैँ स्याहरेकै छन् ।
‘के काममा दौडिरहनुभएको छ, दिदी, रात दिन ?’ आज बिहान दिदी घरैमा भएकाले चिया पिउने बेलामा मैले सोधें । मेरो प्रश्न जवाफ दिनलाई दिदीले आनाकानी गरे पनि मैले कर गरेपछि भन्नुभयो, ‘हेर्न, त्यै’ पार्टीका लागि काम गर्दागर्दै तेरो भिनाजुको ज्यान गयो, पार्टीकै काम गर्दा एउटा भएको छोरो पनि रहेन । म रातदिन पार्टीकै लागि खटिरहेकी छु तर सत्तामा भएको पार्टीले वास्तै गर्दैन । नेताहरूले पनि अचेल त नचिनेजस्तो पो गर्छन्, भेट दिनै गाह्रो मान्छन् । पार्टी सत्तामा गएको बेलामा पनि मजस्तो कार्यकर्तालाई पार्टीले नसम्झिने हो भने कहिले सम्झिने हो त भनेर नेताहरूलाई कराउँदै हिंडेकी नि ।’
‘ह्या दिदी पनि, पार्टी नै अर्कालाई लगेर बुझाउनेहरूले अब तपाईंका लागि केही गर्लान् भनेर नसोचे हुन्छ । देश र जनताका लागि देखाएको सपनाबाट आफैं भाग्नेहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्छन्, अरू केही गर्दैनन् । भो, दौडिन पर्दैन, तपाईं लेख्न–पढ्न रुचाउने मान्छे, लेख्नुस्, पढ्नुस्, किताब निकाल्नुस् । बुहारीलाई मन परेको खानेकुरा पकाउन लाएर खानुस्, साथीभाइ बोलाएर ख्वाउनुस्, भो अरू व्यर्थैको दुःख नगर्नुस्, दिदी ।’ मेरो कुरालाई दिदीले चुपचाप सुनिरहनुभयो । निकै बेरसम्म केही बोल्नुभएन । त्यसैले मैले नै भनें, ‘हेर्नुस्, अब तपाईं सत्तरी वर्ष पुगिसक्नुभयो, दिनभरि भोकै–प्यासै हिंड्नुहुन्छ, कतै भ्वाक्कै लड्नुभयो भने, तपाईंको पार्टीका मान्छेले तपाईंलाई हेर्छन, हेर्दैनन् । आफ्नो स्वास्थ्य र उमेरको पनि ख्याल गर्नुस्, दिदी, मैले भनेको मान्नुस् ।’
म बुझ्छु दिदीको इच्छा, चाहना र रहरका कुरा । दुई दर्जनभन्दा बढी साहित्यका पुस्तक लेखिसकेको मात्र दिदीको योग्यता र क्षमता हैन । कथा, कविता, उपन्यास लेखनमा मात्र नभएर दिदीले पार्टीको सांस्कृतिक फाँटमा रहेर गीत–संगीतको माध्यमबाट पनि सेवा गरेको ती नेता भनाउँदाहरूलाई कसो थाहा नहोला त ? पार्टीमा प्रतिमा दिदी, भिनाजु र भान्जाको ठूलो लगानी छ । एउटा पार्टीका लागि भिनाजु र भान्जाले आफ्नो जीवनको बलिदान दिएका छन्, कसका लागि ? हिजोका दिनमा फाटेको चप्पल लगाउने नेताहरूले आज प्राडो चढून् भनेर हो ? जनतालाई देखाइएको सपनालाई रातारात कुल्चिएर जनताले गरेको बलिदानको वेदीमा आफ्नो सिसमहल ठड्याऊन् भनेर हो ? देशको मुहार फेरिनेछ, जनताले सुखको श्वास फेर्न पाउनेछन भनेर गरिएको संघर्ष, बलिदान र सहादत आजको मतिभ्रष्ट दिन देख्नकै लागि हो त ? जताततै लुट, भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाएको छ । देश र जनताका लागि भनेर गरिएको युद्ध र आन्दोलन त अब एकादेशको कथाजस्तो लाग्न थालिसक्यो । हजारौं सहिदको अवदान सम्झिंदा पनि हुने पीडाको वर्णन गरेर साध्य छैन । उमेरमै श्रीमान् र जवान छोरो गुमाएकी प्रतिमा दिदीलाई अझै पनि यिनै नेताप्रति भर छ, त्यही पार्टीप्रति विश्वास छ जसले आफ्नो पार्टी लगेर विरोधी कित्तामा बुझाएर ऊ केही नभएझैं मुस्कुराइरहेको छ ।
‘कमरेड, पार्टी सरकारमा छ । मेरो र मेरो परिवारले यो पार्टीका लागि गरेको योगदानको पनि मूल्यांकन हुनुपर्‍यो । म सत्तरी वर्षको भइसकें, म पचास पचपन्नको मात्रै भए पनि यत्ति हत्ते गर्ने थिइनँ । मेरो योगदान, योग्यता र क्षमता हुँदाहुँदै पनि, अब पनि मलाई पार्टीले सम्झिएन भने कहिले सम्झिने ? मैले सभासद, मन्त्री, राजदूत खोजेकी हैन । सामान्य प्राज्ञ सदस्यका लागि चैं यस पटक मलाई पार्टीले सम्झिनुपर्छ भन्ने हो, कमरेडको के विचार छ ? संस्कृति विभाग प्रमुख हरिरामसँग मैले स्पष्ट भनेकी छु, भाइ । उनले हुन्छ पनि भनेका छन् ।’ आज पो दिदीले कुरो खोल्नुभयो । तर, मलाई पटक्कै विश्वास छैन, जनतालाई धोका दिने पार्टीले मेरी सोझी दिदीलाई न्याय गर्ला भनेर ।
पार्टीमै नलागे पनि लाग्नेहरूको कुरा सुनेर र पत्रपत्रिका पढेर पनि कुन पार्टी कस्तो भन्ने कुरा सामान्य सचेत नागरिक सबैलाई थाहा छ । दिदी आबद्ध पार्टीले त असल कार्यकर्तालाई चिन्नै छाडिसक्यो भनेर पत्रपत्रिका सामाजिक सञ्जाल जताततै व्याप्त छ । यस्तो अवस्थामा कुनचैं कमरेड हो, त्यो दिदीलाई आश्वासन दिने, बरु उसले दिदीलाई आश्वासन नदिएको भए हुने थियो किनकि त्यो आश्वासन पूरा हुन्छजस्तो मलाईचैं लाग्दैन । आशा पाएर निराश हुनुजत्तिको पीडा अर्को के हुन सक्छ र ?
व्यापारको काममा भएको चापले थुप्रै दिन भयो दिदीसँग बसेर कुरा पनि गर्न पाएको छैन । केही काम पर्‍यो भने दिदी पनि भदा संयमलाई भन्न रुचाउनुहुन्छ, बुहारी स्वस्तिकासँग पनि दिदीकी मिल्ती नै छ तर उहाँको कुरा भदा संयमसँग नै बढी मिल्छ । दुई जना फुपू–भदाभन्दा पनि आमाछोराजस्ता छन् । हुन त प्रतिमा दिदीमा सबैसँग मिलेर बस्न सक्ने क्षमता र गुण दुवै छ ।
‘दिदी, त्यै कामका लागि दौडिरहनुभएको हो ?’ मेरो प्रश्नको जवाफमा हो भन्ने इसारा गर्दै दिदी संयमसँग बाइकमा घरबाट निस्किनुभयो । आँखामा पावरको सेतो चस्मा, सुतीको सारी र तानमा बुनेको एउटा बुट्टे झोला यही नै दिदीको परिचय हो । भिनाजु र भान्जा बितेपछि दिदीले रमाएर रंगीन लुगा लगाएको, गीत गुनगुनाएको र रहर मानेर मिठो भोजन गरेको कम्तीमा मलाई थाहा छैन । उनको श्रद्धा, समर्पण र केन्द्रविन्दु भन्नु नै पार्टी नै हो । खै, यत्तिको समर्पित कार्यकर्तालाई दिदीको पार्टीले कत्तिको न्याय गर्ने हो, हेर्न बाँकी नै छ ।
तीनवटा एकेडेमी प्राज्ञविहीन भएर महिनौं खाली बसेको कुरा पत्रपत्रिकाले लेखेको लेख्यै छ । खै कहिले सदस्यहरूको पूर्ति गर्ने हो ? दिदीको हन्डर कहिले सक्किने हो ? पार्टीमा नवप्रवेशीहरूकै हालीमुहाली छ भन्ने सुन्छु । दुई तिहाइको सरकारले न महँगी नियन्त्रण गर्न सकेको छ न त भ्रष्ट भनेर स्पष्ट चिनिएकाहरूलाई कारबाही नै गर्न सकेको छ । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारबाट जनताले जुन अपेक्षा राखेका थिए, त्यो पूरा हुने लक्षण पटक्कै देखिएन । सत्तामा बस्नेहरूले गफ गरेजस्तो काम पनि गरेर देखाउन सकेको भए जनताको चित्त बुझ्थ्यो होला तर उखानटुक्का भनेर मात्रका देश कसरी समृद्ध र जनता कसरी सुखी हुन सक्छन् र ?
‘दिदी, कत्ति चिन्ता गर्नुहुन्छ ? भो, आशा नगर्नुस्, देश बनाउँछौं, जनतालाई सुखी बनाउँछौं भन्नेहरू आफैं समृद्ध र सुखी हुने बाटोमा हिंडिसकेपछि अब पनि तिनले तपाईं हाम्रा लागि केही राम्रा काम गरिदेलान् भन्ने आसै नगर्नुस्, आशा नै नगरेपछि निराश हुनु पनि पर्दैन ।’ राजनीतिमा खासै चासो नराख्ने मेरी श्रीमती स्वस्तिकाले पनि आज खै किन हो दिदीलाई राम्रैसँग पो सम्झाइन् ।
‘स्वस्तिका, हन आज त तिमीले पनि दिदीलाई सम्झाउन पो थाल्यौं त,’ मैले ठट्टा गर्दै भने ।
‘दिदीको धपेडी देखेर मलाई नै गाह्रो भइसक्यो, त्यसैले दिदीलाई सम्झाकी नि,’ प्रतिमा दिदीलाई चियाखाजा खान आग्रह गर्दै स्वस्तिकाले भनिन् ।
‘खै, अब दिदीको जे विचार । अनि दिदी यो प्राज्ञहरूको निर्णय कहिलेसम्म हुने हल्ला छ त ?’
‘आज भोलि नै हुन्छ भन्छन्,’ यो विषयमा दिदीले अरू कुरा गर्न नचाहेको बुझेपछि हामी आ–आफ्नो कामतिर लाग्यौं । ठुलो छोरा सूचक र बुहारी तृष्णा पनि दिदीको वरिपरि बसेर खै के कुरा गर्दै हाँस्न थाले । म चामलको आफ्नै होलसेल पसलतिर लागें । खाना पनि म पसलमै खान्थें, पसलमा काम गर्ने केटोको हातमा स्वस्तिकाले नियमित रूपमा पठाउने गरेकाले खाना खानै भनेर म दिउँसो घरमा आइरहन्न । ‘ए संयम, फुपूको सदस्य बन्ने कुरा टुंगो लाग्ने त आज हैन र ?’ कलेजपछि सिधै पसलमा आइपुगेको संयमलाई मैले सोधे ।
‘खै बाबा, फुपूले केइ भन्नु भा’छैन ।’
हामी बाउछोरा घर पुग्दा दिदी खाना खाएर सुतिसक्नुभएको रहेछ । हनहनी ज्वरो आएकाले स्वस्तिकाले जँचाएर औषधि पनि खुवाइसकिछन् । भोलि बिहान पो दिदीको सन्चो–बिसन्चो सोध्न उनको कोठामा पसेको त दिदी चिया पिउँदै हुनुहुँदो रहेछ ।
‘बर्बाद भइहाल्यो नि संगम । हाम्रो पूरै परिवारको लगानी र योगदानको पार्टीले रौँ बराबर पनि कदर गरेन,’ दिदीले दिक्क मान्दै भन्नुभयो ।
‘किन दिदी, के भयो र ?’
‘प्रज्ञामा प्राज्ञहरूको नियुक्ति भयो तर तीनवटै प्रतिष्ठानमा मेरो कतै नाम छैन ।’
‘यिनले यही गर्छन्, भो आशा
नगर्नुस्, भागदौड नगर्नुस् भन्दा, तपाईं मान्नुहुन्न, दिदी ।’
‘कुरा सुन्न संगम, मभन्दा योग्यहरू आएको वा ल्याएको भए त ठिकै थियो तर मजस्तो जिन्दगीभरि कलम चलाएको, पार्टीमा अथक योगदान गरेको मान्छेलाई लत्याएर प्राज्ञ कस्तालाई बनाएका छन् भन्दा
आफ्नो फरियाका साइनो पर्नेलाई, पार्टीको हन्डी खानेलाई र जिन्दगीभरि बोर्डिङ स्कुल चलाएर बस्नेहरू पो प्राज्ञ बनेर आएका छन्, गाइड लेख्नेहरू आएका छन् ।
अझ त्योभन्दा पनि विडम्बना त जिन्दगीमा के–के लेखेको छ भनेर अत्तोपत्तो नभाको मान्छेसमेत प्राज्ञ बनाएर ल्याइएछ, कोइ तीन–तीन पटक प्राज्ञ भएर दोहोरिएका हैनन् तेहरिएका छन् । भाइ, म प्राज्ञ नभएकोमा चिन्ता वा दुःख मनाउ छैन तर यिनले मेरो परिवारको योगदानसमेत बिर्सिएछन्, यसमा साह्रै दुःख लागेको छ ।’
दिदीलाई सम्झाएर म र स्वस्तिका आ–आफ्नो कामतिर लाग्यौं । दुई–चार दिन दिदी कतै पनि जानुभएन, पार्टीले थुप्रै साहित्यकार–कलाकारहरूलाई सम्मान गर्ने क्रममा प्रतिमा दिदीलाई पनि सम्मान गर्ने भयो, त्यही बेहोराको चिठ्ठी पनि आयो । तर, दिदी जानुभएन । उहाँ घरैमा बसिरहनुभयो । दिदीलाई ननिको लाग्ला भनेर हामी कसैले पनि किन र कसो भनेर सोधेनौं बरु एक दिन दिदीले एउटा खाम दिएर संयमलाई कतै पठाउनुभयो । हामीले नसोधी दिदीले नै भन्नुभयो, ‘विचार, युद्ध र आन्दोलनसँगै देखेका परिवर्तन र मुक्तिका सबै सपनाहरूबाट म आज मुक्त भएँ, ती सबै कुराहरूसँग मेरो मोहभंग भयो । हेर भाइ बुहारी हो, त्यसैले मैले पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी आज राजीनामा पठाएँ । अब अमूक पार्टीको म भोटर मात्रै रहन्छु । मैले मरेर लानुपर्ने केही छैन, मेरो श्रीमान्, छोरो र मैले अँगालेको विचार त म मरेपछि पनि मसँगै जान्छ । ल अब तिमीहरू पनि जाओ र मलाई एक्लै रुन देऊ, तिमीहरूको भिनाजु र भान्जा अर्थात् मेरो लोग्ने र मेरो एक्लो छोरो मारिँदा पनि मैले विचार र पार्टी भनेर रोकेको आँसुलाई आज म बगाइदिन्छु । तिमीहरू जाओ, मलाई निर्बिघ्न रुन देओ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७५ ११:५९